Showing १-६ of ६ items.
सल्लेरी बचत ठगीको ३ वटा मुद्दा आकर्षण, तिर्न नसके के हुन्छ ?
सल्लेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण विकमाथि तीनवटा मुद्दा आकर्षण हुनसक्ने देखिएको छ । उनले सहकारीको पासबुक दुरुपयोग गरी सुनमा लगानी गरेका कारणले पनि उनीमाथि ठगी, सहकारी ऐन र बैङ्किङ कसूरअन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्ने देखिएको हो । ‘तीनवटा मुद्दा चल्न सक्छ’ कानून व्यवसायी पदम इस्वो भन्छन्, ‘ठगी भइहाल्यो, अर्को सरकारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चल्छ, अनुसन्धानको क्रममा सुन–चाँदी व्यवसायमा लगानी गरेको देखिएमा बैङ्किङ कसूरमा पनि कारबाही हुन्छ ।’ उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा सुनमा लगानी गरेको देखिने स्थिति सिर्जना भएमा राष्ट्र बैङ्कको अनुमति नलिई वित्तीय कारोकार गरेक
प्रकाशित मितिः श्रावण ३२, २०७६
पूर्व वाणिज्य मन्त्री मीन विश्वकर्माले कृष्णकाे संरक्षण गर्दा बचतकर्ता पीडित भएको आरोप
धरान / सहकारीको करोडौ रकम सुनमा लगानी गरी लगानी डुबाएर फरार रहेका धरानस्थित सल्लेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण विक पक्राउ परेका छन् । गत असार २३ गते देखि फरार रहेका विकलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी ढुण्डीराज न्यौपानेले जानकारी दिए । विशेष सुराकीको आधारमा विशेष प्रहरी टोली खटाएर सोमबार राती पक्राउ गरिएको डिएसपी न्यौपानेले जानकारी दिए । उनी बुटवलको एउटा सटर कोठा भाडामा लिएर लुकीछिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो । बुधबार राती १ बजे विकलाई धरान ल्याइएको छ । विक फरार भए लगतै इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा ८५ जना पीड
१,८८० पटक पढिएको
सहकारीको करोडौं डुबाएर फरार बनेका कृष्ण विक बुटवलबाट पक्राउ
धरान / सहकारीको करोडौ रकम सुनमा लगानी गरी लगानी डुबाएर फरार रहेका धरानस्थित सल्लेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण विक पक्राउ परेका छन् । गत असार २३ गते देखि फरार रहेका विकलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी ढुण्डीराज न्यौपानेले जानकारी दिए । विशेष सुराकीको आधारमा विशेष प्रहरी टोली खटाएर सोमबार राती पक्राउ गरिएको डिएसपी न्यौपानेले जानकारी दिए । उनी बुटवलको एउटा सटर कोठा भाडामा लिएर लुकीछिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो । बुधबार राती १ बजे विकलाई धरान ल्याइएको छ । आज २ बजे इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा पत्रकार सम्मेलन गरि विकको
१,२१७ पटक पढिएको
सहकारीमा ७४ लाख रुपैयाँ हिनामिना: व्यवस्थापक फरार
विराटनगर / झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका – ३ बुधबारेस्थित सुकर्म सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ७४ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेकोे रकम सहकारीका व्यवस्थापकहरूको मिलेमत्तोमा हिनामिना भएको हो । बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम लिएर सहकारीका संस्थापक व्यवस्थापक मोरङको पथरीशनिश्चरे घर भई बुधबारेमा बस्दै आएका राजेश लिम्बु फरार भएका छन् । १ सय ६० जना सेयर सदस्य रहेको सहकारीको सेयर पूजी १ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने ऋण लगानी ३५ लाख रुपैयाँ गरेको सहकारीले जनाएको छ । बचत भएको रकम लिएर सहकारीका संस्थापक व्यवस्थापक लिम्बु गत माघ १९ गते देखि सम्र्पक विहीन भएका छन् । व्यवस
प्रकाशित मितिः असार ५, २०७६
७२३ पटक पढिएको
सहकारीको नाममा लाखाैं उठाएर फरार
इटहरी/ सुनसरीको इटहरीस्थित खनारको एक सहकारीले बचतकर्ताको रकम लिएर सञ्चालक फरार भएको छ । सर्वसाधरणले बचत गरेको लाखौं रुपैयाँ लिएर खनार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष फरार भएका हुन् । खनारमा करिब साढे ३ वर्ष अगाडि खुलेको बचत तथा ऋण सहकारीले राखेको पैसासमेत लिई अध्यक्ष सन्तोष साह कार्यालयमा ताला लगाई फरार भएका हुन् । खनारका स्थानीय बचतकर्ता हेमलता चौधरीले भनिन् । गाउँभरीका सर्वसाधरणले पैसा बचत गरेको भए पनि लिएर गएपछि आफूहरू समस्यामा परेको बताइन् । आफूले ६६ हजार रुपैयाँ बचत गरेको बताउँदै इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा उजुरी दिएकी छन् । कार्यालयमा ताला लगाएर साह फ
प्रकाशित मितिः फाल्गुन २, २०७५
९२४ पटक पढिएको